10 Nnukwu ndebiri Email You gaghị echefuru na 2020 - 99steem
10 Nnukwu ndebiri Email You gaghị echefuru na 2020
Ozi ịntanetị bụ ihe dị ezigbo mkpa n’oge anyị ugbu a. Tupu narị afọ a, ozi ịntanetị adịghị mkpa. Ndị mmadụ na-enwe mmasị izute ihu na ihu iji kpaa okwu ọ bụla ma ọ bụ buo ụzọ ịtụnye ihe ọ bụla ma ọ bụ mee ihe ọ bụla dị mkpa
Ma oge agbanweela ugbu a, dịka anyị bi n'ime ụwa nke jupụtara n'ọgba aghara, ndị mmadụ nwere obere ntakịrị oge iji gbanahụ n'ezie ịga zute mmadụ, yabụ, ha chọpụtara ụzọ ka mma ma dị irè nke ọtụtụ ndị mmadụ nwere mmasị na ya. Thatzọ m na-ekwu maka ya bụ ịkọ banyere achụmnta ego na ozi ịntanetị.
Ozi ịntanetị enwetawo ihe dị mkpa na ndụ anyị, ma ànyị kwesịrị ịtụle ihe ma ọ bụ maka izu ahịa, ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eme site na email.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mgbasa ozi email adịla anya oge ụfọdụ, ọ na-anọgide na-akwọpụ nnukwu nsonaazụ maka ọrụ nnwere onwe mba ahụ.
N’eziokwu, afọ ole na ole gara aga, sistemụ mgbasa ozi abanyela n’ime ma na-apụta. Emere ihe ndi otu a na etinye uche ha na oke na oganihu dika odi. Ihe ha haziri ugbu a bu ihe di nkpa nke bara uru nye ndi mmadu ha, nhazi onu ahia, ikwugide ndi ozo ha na elu igwe bu ihe a si di.
Na mgbakwunye na eziokwu ahụ bụ email bụ usoro pụrụ iche iji nye ndị zụrụ ahịa, ụlọ ọrụ achụmnta ego na-eji email mgbe niile ịbịarute ndị ahịa ọhụrụ, nke dị adị, na nke ọdịnihu. Ọ na-enweta nkwanye ugwu karịa site na ịnwe nhọrọ izipu ozi nkeonwe, nke dị mkpa, nke na-eweta ohere iji nyere aka nweta mmezi ndị ahịa na uru ego ndị ọzọ dị mkpa.
Email ekwentị agbagoro dika ihe okike di omimi ma burukwa ndi ekwenti nile. 38.5% nke obere oge a na-eji email eji eme ihe, ebe a na-eji naanị 10% na-enyocha ndụ dabeere na weebụ. Nọmba ndị a na-egosi ọdịiche dị n'etiti ahụmịhe email na ahụmịhe ntanetị, na otu esi email anwụghị, ọ ka na-akwụsịkwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Izipu ozi email bu udiri nkwukọrịta. Taa, a na-edenye aha ngbako n'etiti ụlọ ọrụ achụmnta ego, otu na otu dị iche iche, maka ọtụtụ akụkụ na-eji email. Nke a abụghị sọ ọnụ dị oke ọnụ mana ọzọkwa usoro kachasị ịdabere maka iji kwekọọ. Ndi otu a na otu ha na ndi otu ha na ndi otu ha ji ekwu okwu na ebum n’uzu ahia A na-etinye arịrịọ ahụ site n'ozi; a na-enyocha ajụjụ a site na ozi; a na-eziga nnwale onyonyo nke ibubata / ire ahia na-eji email dị ka njikọ. Ọzọkwa, email na-enye usoro zuru oke ma dị nchebe maka mmekorita. Enwere ike ichota ndekọ nke ozi ịntanetị gara aga nke ọma na nkeji.
Daysbọchị ndị a, ngbasa ozi email eruola karịa azụmahịa n'etiti ndị nnọchite anya, nke na-emepe ụzọ maka ọtụtụ ihe dị mma na omume siri ike. Ugboro ugboro, ndị ọrụ ga-agbasa asịrị banyere ndị ọrụ ma ọ bụ mkpakọrịta ndị ọzọ, kpughee data ma ọ bụ ozi maka nnọkọ ndị na-adịghị mma, jiri okwu mmekorita na mmekorita ha nke na-agbaso omume omume nke mmadụ na mkpakọrịta.
Emailkwalite ihe gị ma ọ bụ ọrụ gị site na ozi ịntanetị nwere ike ịbụ usoro ọsọ ọsọ, mmegharị, na nke bara uru iji rute ndị ahịa ọhụrụ ma jigide ndị ahịa dị adị site na ime ka ọ dịghachi na nleta saịtị.
Azụmaahịa email nwere ike ikwe ka ị tinye uche gị anya na ozi ndị ahaziri iche. Nke a nwere ike inyere gị aka iwulite ndị ahịa gị nke ọma. O nwere ike imeziwanye ọnụego mmeghachi omume na nkwado gị na-akwalite.
O zuru oke na ịgwa gị mkpa ozi ịntanetị dị na azụmaahịa ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọzọ. Ka m gwa gị ihe dị ka iri n’ime ndebiri email kachasị mma ị ga - ahụ n’anya.
Mkpụrụ obi njem njem nleta email 99steem:
Mkpụrụ obi njem bụ otu n'ime ozi email anyị enwere ike iji ziga ndị mmadụ mkpọsa gbasara ịga njem gburugburu ụwa.
A haziri ndebiri email a maka ndị njem anyị chọrọ ka ndị mmadụ soro ha mee njem ma ọ bụ nwee ike iji ha nkịtị ka ha wee zigara ndị nọ ha gburugburu ozi-e wee nweta nzaghachi dị mma.
Ihe ndebiri a bụ ndebiri njem njem nke onye ọrụ nwere ike itinye foto nke ebe ha chọrọ ịkpọ ndị mmadụ, azụmahịa ha na-enye, na nzaghachi nke ndị gị na ha so.
Nke a ga-enwe mmetụta dị ukwuu n’ahụ ndị ha zitere ozi email na ha ga-enwe ike ime ka ha kweta na ọ bụ onye ziri ezi ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ga-eso gaa.
Gaa leta anyị na 99steem taa ma nweta ndebiri email ndị a maka ndị njem ma ọ bụ ndị njem.
Emaildị email njem
Nri email na nri Mood 99steem:
Ndewo, ụlọ oriri na ọ fantasticụ ,ụ anyị, cafe, ma ọ bụ ndị nwere azụmaahịa nri. Anyị nwekwara nnukwu ihe maka gị. Na 99steem, anyị nwere ụfọdụ nnukwu ndebiri ndebiri. Ndebiri email ndị a nwere nri dị mma ma mara mma ile anya.
Akwukwo ozi erimeri a ga - ejide anya nke onye ahia gi. Enwere ike iji mpempe akwụkwọ ozi nri a maka ebumnuche dị iche iche. Nwere ike izipu ndebiri ndebiri email ndị a ma mekwaa ya ka ọ bụrụ kaadị menu izigara ndị ahịa gị ka ha wee si ebe ahụ họrọ ihe ha chọrọ iri.
A nwekwara ike iji ndebiri email a nri dị ka ezigbo azụmahịa, ebe ị nwere ike izipu ihe nlereanya ahụ na azụmahịa ị na-enye na email.
Enwekwara ike iji ndebiri erimeri ihe oriri a ziga nri nye ndị na-ede blọgụ nri ka ha nwalee nri gị ma mee ka ndị mmadụ mara banyere gị.
Ya mere, ụdị email nri a nwere uru dị ukwuu, ị nwere ike nweta ngwa ngwa site na 99steem taa wee zigara ndị ahịa gị nke a ma ọ bụ jiri ya na azụmahịa ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ.
ndebiri ozi nri
Nlele email nke Magnolia 99steem:
Lee ndebiri ọzọ metụtara nri, mana ndebiri a bụ maka ụlọ oriri na ọesụ cafụ ma ọ bụ ụlọ mmanya. Nke a bụ ezigbo ihe ndebiri maka ime ndoputa n'oge ọ bụla ịchọrọ.
Restaurantslọ oriri na ọ canụ canụ ahụ nwere ike izigara ndị ahịa ha ozi ịntanetị iji lelee tebụl ha chọrọ idobe, ma ọ bụ tebụl maka ezinụlọ ma ọ bụ tebụl mmadụ abụọ ma ha nwekwara ike ịhọrọ ebe ọ bụla ha chọrọ ka usoro ha nọrọ.
Ndebiri email a ndoputa gi nyere gi aka inye ndi ahia gi otutu otutu nhọrọ. N'inwe ọtụtụ atụmatụ dị iche iche, ndebiri a bụ ezigbo nhọrọ ịzụta ma zigara ndị ahịa gị nke a ma hapụ ha ka ha nwee obi ụtọ dị ukwuu.
Email ndoputa oriri na ọ .ụ .ụ
Nwa akwukwo oku nke Ram Ram 99steem:
Model email nke Black Ram bụ ndebiri email ọzọ metụtara nri. Emere ndebiri email a maka ebe a na-echekwa ma ọ bụ mmanya nwere ụdị mmanya dị iche iche.
Ha nwere ike iji ndebiri email a mee ka ndị mmadụ mara maka ụdị mmanya ị nwere na eserese ndị mara mma na ngosipụta nke nwere ike ijide anya ndị ahịa.
You nwere ike izipu ndebiri email a dịka broshuọ iji mee ka ndị mmadụ mara maka ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ mmanya gị na ihe ị nwere maka ha yana otu ọrụ dị mma ị na-enye.
Nweta ụdị email email Black Ram a dị mma site na 99steem ugbu a ma zigara ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọzọ ndebiri email a.
Emaillọ nri email
Ihe ndeputa izizi nke 99steem:
Anyị nwere ndebiri email dị mfe maka ndị ahịa anyị dị ịtụnanya chọrọ chọrọ ndebiri email. Ndepụta email a bụ ezigbo ntọala maka ị ziga ndị ahịa gị ma ọ bụ onye ọ bụla ịchọrọ.
Enwere ike dezie ndebiri email a n'ihe ọ bụla ịchọrọ. Younwere ike ịgbakwunye onyonyo nke ụdị ọ bụla ịchọrọ. I nwekwara ike itinye agba na ndebiri email gị.
Ndebiri email a ga - enyere gị aka iziga ndebiri email nwere ike ịdị mfe ma mara mma ma gha enye ozi gị n’ebe ndị na - anabata gị ozi nọ.
Nweta ndebiri email a site na 99steem taa, ma zigara ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ ibe gị ma ọ bụ onye isi ma ọ bụ ọgbakọ ọ bụla ọzọ.
Ndebiri ederede nke nde
Zụọ ahịa gburugburu ndebiri 99steem:
Shoplọ ahịa email a na-ezuru ahịa bụ ndebiri e-azụmahịa nke nwere ike inyere gị aka ire ndị ahịa gị ntanetị n'ịntanetị.
Enwere ike iji mpempe akwụkwọ ozi-e-azụmahịa nke a zigara ndị na-ede blọgụ ka ha nwee ike ịkwalite ngwaahịa gị ma nwee ike ịgwa ndị na-eso ụzọ ha banyere ndị ahịa gị.
You nwere ike iji ndebiri e-commerce a zigaara ndị ahịa gị ozi ma mee ka ha mata banyere azụmahịa gị ma ọ bụ ahịa ọhụụ gị.
Nwekwara ike inye ndi ahia gi ego osiso, meekwa ha obi uto ka ha zuta ahia n’aka gi karia.
Nweta ndebiri e-commerce a site na 99steem ma zigara ndi ahia gi ozi email kacha mma.
Emailzụ ahịa email e-commerce
Emailzụ ahịa email nke ụlọ ahịa 99steem:
Emaildị ndebiri email nke ụlọ ahịa bụ ihe ọzọ site na ndebiri e-commerce anyị. Emaildị email a nwere usoro dị oke mma nke nwere ike ịmasị ndị ahịa gị ma nwee ike inyere gị aka irite nnukwu ego ị na-enweta.
Enwere ike gbanwee ndebiri e-azụmahịa a dị ka uche gị si dị. Younwere ike ịgbakwunye ihichapụ ihe dị iche iche na ndebiri email a wee tinye onyo.
Nwere ike itinye ọtụtụ ihe onyonyo dị mfe na email na e-azụmahịa gị maka ndị ọkpọ na-ahụ n'anya na-enwu akwa na-enwu enwu, ma ọ bụ nwee ike itinye ihe oyiyi ọ bụla ịchọrọ ma mee ka anya na-ele gị anya ka ndị ahịa gị nwee mmasị na gị na ndebiri gị wee zụta site na ụlọ ahịa gị.
Gaa na 99steem wee nweta ụdị ozi ịntanetị a mara mma nke tụrụ ọhụụ maka ụlọ ahịa gị ma nweta ndị ahịa ọhụrụ.
Nwee obi ụtọ email ndebiri 99steem:
Be Shoppy bu ihe ozo e-commerce site na nchikota anyi. Emaildị email a e-commerce bara ezigbo uru maka ndị ahịa anyị na-ere ahịa n'ịntanetị.
You nwere ike iji ndebiri e-commerce a dị ka broshuọ wee nwee ike dezie ya na ihe ọ bụla ịchọrọ ịnye ndị ahịa gị.
Can nwere ike idezi ndebiri a ma zigara ndị ahịa gị ka ha nye ha ego dị na ngwaahịa ma ọ bụ kọọrọ ha maka onyinye gị dịka ịre ahịa 50% ma ọ bụ oge oyi ma ọ bụ n'oge oyi.
Inwere ike inye ahia ngwa ahịa nke a site na iji ngwa ahia a na e-commerce. Enwere ọtụtụ narị ihe dị iche iche enwere ike iji ụdị e-azụmahịa a dị mma.
Nweta ụdị e-commerce a nke mara mma site na 99steem ma gwa ndị ahịa gị banyere nnukwu onyinye site na ozi-e.
Emailzụ ahịa email
Emaillọ ahịa email shopSession 99steem:
Ọzọ site na ndebiri e-commerce anyị bụ ndebiri email nke Shoplọ ahịa. Enwere ike iji ndebiri email a banyere e-commerce na nde mmadu n'uzo di iche iche.
Afọmba email a abụghị naanị maka ịre ngwaahịa ejiji gị, mana ị nwekwara ike iji ndebiri a wee ree akwụkwọ ịtụnanya site n'aka ndị edemede ụwa anyị dị ebube.
Ma ọ bụ, ịnwere ike iji ụdị e-commerce a dị mma iji ree ngwa ụlọ, ma ọ bụ ngwongwo kichin, ma ọ bụ ngwaahịa ịme achịcha, ma ọ bụ arịa ma ọ bụ ngwa ọrụ, ọla, na ọtụtụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Jiri ndebiri e-commerce a mee ka ụwa mara banyere azụmahịa gị dị mma na ihe ị na-enye ha.
Nweta ụdị email a dị mma site na 99steem taa ma mee ka ụwa mara maka nnukwu azụmahịa gị.
E-commerce ndebiri email
Email izi ezi na-adọrọ adọrọ 99steem:
Usoro ndebiri nke 99steem bu ihe nlere di mma site na udi ozo site na 99steem, nke ahu bu ihe omumu email.
Emaillọ akwụkwọ agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ dị egwu a bụ nnukwu ụzọ iji mee ka ụmụ akwụkwọ mata banyere mmụta dị iche iche ị na-enye.
Dika umu akwukwo enweghi otutu ihe ha nwere mgbe ha gha achoghi ihe omumu, I nwere ike iji ndeputa email a nye ha ego ndi umu akwukwo na ha n’enye gi, ka ha mara banyere nnukwu ohere ha nwere.
Enwere ike iji ndebiri email a zigara nne na nna nke ụmụ akwụkwọ ahụ ka ha hapụ ha banyere kọleji dị elu na mahadum na ihe ha na-enye ụmụ ha.
Nweta ụdị agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ a dị egwu site na 99steem taa ma jiri ndebiri a mee ka ụmụ akwụkwọ yana ndị nne na nna nwee mmasị.
Anyị nwere onyinye dị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị na-enye ndị ahịa anyị dị ịtụnanya ụdị ndezi email site n'oge ruo n'oge, ịnwere ike ịnweta ngwa email ndị ahụ na weebụsaịtị anyị n'efu. Anyị nọ ebe a ime ka ndụ gị dịkwuo mfe ma dị mma, maka nke ahụ, anyị nwere ike ịnye gị ọtụtụ ndị ọzọ. Ihe niile ị ga - eme ka anyị debanye aha websaịtị anyị wee bụrụ onye otu anyị, mgbe ahụ ị ga - enweta ọtụtụ perks nke ịbụ ndị ahịa anyị mgbe niile.
Indonesian Template Email Template Email 2020 Template Email luar biasa Template Email minimalis Template Email terbaru
99steem, Indonesian Template Email Template Email 2020 Template Email luar biasa Template Email minimalis Template Email terbaru